Ihe mgbakwunye kachasị mma: Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Mbido > Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Mgbe ihe ọmụmụ 2019 kwubiri na Nicotinamide Mononucleotide dị mma maka oriri mmadụ ma ọ bụrụ na amachibidoro oriri ya na oke a kapịrị ọnụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emepụta ihe abanyela ahịa na onyinye ha. Nnukwu nhọrọ a emeela ka ndị na-azụ ahịa nwee mgbagwoju anya banyere nke Nictonimade Mononucleotide (NMN) agbakwunye kachasị mma maka ha. N'echiche anyị, mgbatị kachasị mma nke Nicotinamide Mononucleotide (NMN) na 2021 bụ ụlọ ọrụ Cofttek.
Cofttek bụ ụlọ ọrụ A + akpọrọ aha nke nọ n'ahịa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 12 ma mepee onye na-eso ụzọ na-eguzosi ike n'ihe n'oge a. NMN ntụ ntụ nke ụlọ ọrụ ahụ nyere bụ nke a nwalere ụlọ nyocha atọ, NMN na-emepụta ọgwụ na-esite n'aka otu ụlọ ọrụ ndị nyere NMN maka ule dị iche iche dị mkpa nke ụmụ mmadụ meworo n'ime afọ. Na NMN ntụ ntụ nke Cofttek nyere ha na-eme ka mmata ya dị mfe n'ahụ, si otú ahụ na-abawanye ụba bioavailability nke ngwaahịa yana ọrụ arụ ọrụ ya. Nke ka mkpa, ntụ ntụ a na-abata na nnukwu ma ị nwere ike ịchekwa ya ọnwa atọ. Na mkpokọta, nke a bụ otu n'ime mgbakwunye kachasị mma dị ugbu a n'ahịa nwere ogo ọrụ dị elu, ọ na - esikwa na ụlọ ọrụ wepụtara ngwaahịa a pụrụ ịdabere na ya kwa afọ.
Gịnị bụ Nicotinamide Mononucleotide (NMN)?
Nicotinamide Mononucleotide (Ọgwụ)1094-61-7) ma ọ bụ NMN bụ nucleotide nke dị n’ime ọtụtụ nri anyị na-eri. A na - ahụ ya na ube oyibo, broccoli, kukumba, kabeeji, edamame, na tomato. Agbanyeghị, ọnụọgụ NMN nke nri ndị a na-enye ezughị iji kwado ọrụ anụ ahụ bụ isi ma yabụ, a na-adụ ndị mmadụ ọdụ ka ha were mgbakwunye NMN. Ma, gịnị kpatara NMN ji dị oke mkpa maka ahụ?
Nicotinamide Mononucleotide ma ọ bụ NMN bụ ihe dị na Nicotinamide Adenine Dinucleotide ma ọ bụ NAD +. N'okwu dị mfe, NMN bụ onyinye na-agbanwe n'ime NAD + site na usoro mmeghachi omume kemịkal nke na-eme n'ime sel. NAD +, n'aka nke ọzọ, dị ka ihe dị mkpa maka ahụ ka ọ na-arụ ọtụtụ ọrụ dị mkpa, gụnyere idozi usoro ahụ circadian, imebi nri iji hapụ ike cellular, na ime ka mmeghachi omume enzymatic dị mkpa, ụfọdụ n'ime ha na-egbu oge ịka nká. N'ụzọ dị mwute, ọ bụ ezie na NAD + dị n'ime sel ọ bụla nke ahụ, nrụpụta ya na-ebelata ka ọ dị afọ. Nke ka mkpa bụ na ọ nweghị nri mmadụ ga-eri iji mụbaa mmepụta nke NAD + n'ime ahụ. Ya mere, ọ bụ na ahụ chọrọ ihe NAD + nke na-agbanwe ghọọ NAD + n'ime sel ahụ, si otú a na-edozi ọdịda ya n'ime ahụ. Nke a bụ ebe ojiji nke mgbakwunye NMN batara.
Nmn kedu maka mma?
Achọpụtala NMN iji melite ọrụ insulin na mmepụta, na-ebute uru ndị ọzọ na-emetụta yana ịmachi glucose. Karịsịa, ihe mgbakwunye NMN nwere ike inyere aka rụọ ọrụ iji belata ọnọdụ metabolic dị ka ọrịa shuga, ọrịa imeju araba, na oke ibu.
Nmn nwere ike gbanwee ịka nká?
Nlekọta nke nicotinamide mononucleotide (NMN) Egosiputala iji mebie dysfunctions metụtara nká.Nicotinamide mononucleotide (NMN) supplementation na-akwalite profaịlụ okwu miRNA na-eme agadi na akwara nke ụmụ oke, na-ebu amụma epigenetic rejuvenation na mgbochi atherogenic mmetụta.
Kedukwanu nke i ji eme Nmn okike?
Enwere ike ịnye NMN n'enweghị nsogbu na oke ma achọtara ya n'ọtụtụ nri, gụnyere broccoli, kabeeji, kukumba, edamame na ube oyibo. Ọmụmụ ihe ọhụrụ ahụ na-egosi na mgbe NMN na-agbaze na mmiri ọ drinkingụ drinkingụ ma nye ụmụ oke, ọ na-apụta n'ọbara n'ime ihe na-erughị nkeji atọ.
Nmn nwere ike ịbawanye ogologo ndụ?
Ndị ọkà mmụta sayensị amụwo ihe abụọ dị n'etiti, nicotinamide riboside (NR) na nicotinamide mononucleotide (NMN), karịa ọtụtụ ndị ọzọ, nyocha ahụ na-agbakwa ume. Ọtụtụ nnyocha na-egosi na ịgbakwunye na ihe ndị a nwere ike ime ka ọkwa NAD + dịkwuo ogologo ndụ, nke yist, ikpuru, na ụmụ oke.
Ogologo oge ole ka Nmn ga-anọ na sistemụ gị?
Ọmụmụ ihe anyị ugbu a na-egosi n'ụzọ doro anya na NMN na-etinye uche ngwa ngwa site na eriri afọ n'ime mgbasa ọbara n'ime 2-3 nkeji ma wepụtakwa site na mgbasa ọbara n'ime anụ ahụ n'ime 15 min.
Gini na eme mgbe ịkwụsị nmn?
Resveratol na NMN na-arụ ọrụ site na ime ka ikike nke sel dị gị n'ahụ rụzie onwe ha. Yabụ, ọ bụrụ na ị were ha nwa oge wee kwụsị ya agaghị eme ka ị laghachi ozugbo na steeti ị nọ tupu iwere ha n'ihi na mgbanwe ndị ahụ bụ ezigbo mmelite na ọrụ sel.
Nmn o na eme gi ka idi nwata?
“Ourlọ nyocha anyị gosipụtara na inye NMN oke na ihe karịrị ọnwa 12 na-egosi mmetụta mgbochi ịka nká.” Dị ka Imai si kwuo, ịsụgharị nsonaazụ ụmụ mmadụ na-egosi NMN nwere ike inye mmadụ mmadụ metabolism nke 10 ruo 20 afọ.
Kedu ihe mgbakwunye kachasị mma maka akpụkpọ ahụ merela agadi?
Ihe mgbakwunye iri na abụọ kachasị mma
Nicotinamide riboside na nicotinamide mononucleotide
Kedụ ka m ga-esi wee wọllị ndammana?
Yiri anwụ anwụ.
Mbelata oriri shuga.
Kwụsị ise siga.
Jiri mmanu aki oyibo.
Beta beta carotene.
Na-a lemonụ lemon Balm akwukwo tii.
Gbanwee ọnọdụ ụra.
Saa ihu gị.
Zere ìhè ultraviolet
Up gị antioxidants
Kedụ ka m ga - esi gbanwee akpụkpọ ịka nka?
Iji nyere ndị ọrịa ha aka igbochi nká nke akaghi aka, ndị ọkachamara n'ihe banyere ọrịa na-enye ndị ọrịa ndụmọdụ ndị a.
Chebe akpụkpọ gị site na anyanwụ kwa ụbọchị.
Tinye mmanu nke onwe gi karia inweta tan.
Youụ sịga, kwụsị.
Zere ikwughachi ihu gị ugboro ugboro.
Rie nri dị mma, nke kwesịrị ekwesị.
Na-a lessụ obere mmanya.
Na-emega ahụ́ ọtụtụ ụbọchị n'izu.
Sachaa anụ ahụ gị nwayọ.
Saa ihu gị ugboro abụọ n’ụbọchị ma mgbe ị sweụchara ọsụsọ.
Kwụsị iji ngwaahịa nlekọta anụ ahụ na-agba agba ma ọ bụ na-ere ọkụ.
Kedu ihe Sinclair kwadoro?
David Sinclair were:
Resveratrol - 1g / kwa ụbọchị - ụtụtụ na yogọt (lee ebe ịzụta) Nicotinamide Mononucleotide (NMN) - 1g / kwa ụbọchị - ụtụtụ (lee ebe ịzụta) Metformin (ọgwụ ọgwụ) - 1g / ụbọchị - 0.5g n'ụtụtụ & 0.5g n'abalị - ma e wezụga ụbọchị mgbe ị na-emega ahụ.
Nmn o nwere side side?
Mgbe ejiri ọnụ ya: Nicotinamide riboside bụ POSSIBLY SAFE mgbe ejiri ya dị mkpirikpi. Mmetụta mmetụta nke nicotinamide riboside na-adịkarị nwayọọ. Mmetụta ndị ọzọ nwere ike ịgụnye nsogbu afọ dịka ọgbụgbọ na bloating ma ọ bụ nsogbu anụ ahụ dịka itching na ọsụsọ oke.
Kedu ihe ndị dị na resveratrol?
Mgbe a na-eji ọnụ gị eme ihe: Resveratrol bụ NT SAKWU AHF AH when AH when mgbe ejiri ya na ego dị na nri. Mgbe a na-ewere ya na ọgwụ ruo 1500 mg kwa ụbọchị ruo ọnwa 3, resveratrol bụ POSSIBLY SAFE. Ejirila ọgwụ dị elu ruo 2000-3000 mg kwa ụbọchị n'enweghị nsogbu maka ọnwa 2-6. Otú ọ dị, usoro ọgwụ ndị a dị elu nke resveratrol nwere ike ịkpata nsogbu afọ.
Ndi nicotinamide di mma iwere kwa ubochi?
Nicotinamide riboside nwere ike ọ dị mma na ole na ole - ma ọ bụrụ na enwere mmetụta ọ bụla. N’ọmụmụ ihe mmadụ, ịnara 1,000-2,000 mg kwa ụbọchị enweghi mmetụta ọ bụla na-emerụ ahụ. Agbanyeghị, imirikiti ọmụmụ mmadụ na-adị mkpụmkpụ ma nwee ndị pere mpe ole na ole. Maka echiche ziri ezi banyere nchekwa ya, ọ dị mkpa ka ọmụmụ ihe mmadụ siri ike karị.
Gini mere otutu NADH ji di njo?
NADH a na-emebiga ihe ókè nwere ike imebi nhazi ọhụụ n'etiti NADH na NAD +, wee mechaa nwee ike ibute nrụgide oxidative na ọtụtụ ụdị ọrịa metabolic.
Kedu nke ka mma Nmn ma obu NR?
A na-echekarị NR dị ka ezigbo ihe ịga nke ọma nke NAD +, mana nwa nwanne nna ya NMN, ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe na Basis, na-ewelite nku anya dị ka nwatakịrị ọhụrụ nọ na mgbochi.
NMN dị nnọọ ibu karịa NR, nke pụtara na ọ na-adịkarị mkpa ka etisasị ya iji banye n'ime sel ahụ. NR, ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ NAD + precursors (dị ka nicotinic acid ma ọ bụ nicotinamide) na-achị kachasị elu na arụmọrụ. Mana nye NMN ọnụ ụzọ ọhụrụ, nke ọ ga-abanye na ya, ọ bụ egwuregwu ọhụụ.
Kedụ ihe kachasị mma Nmn?
Kedu Nmn supplementation kachasị mma?
NMN Sublingual Mbadamba.
Nmn agbanwe agadi?
Egosiputa ụzọ iji mee ka mmụba na ọkwa NAD + meziwanye ọrụ mitochondrial na ụmụ anụmanụ ochie, na-agbanwe ụfọdụ nfu na-eme na afọ. E gosipụtara nchịkwa nke nicotinamide mononucleotide (NMN) iji belata mmebi iwu metụtara ịka nká.
NMN ole ka ị kwesịrị ịnara?
Ọ bụ ezie na ọmụmụ ihe egosiwo na Nicotinamide Mononucleotide ma ọ bụ NMN dị mma maka iji mmadụ mee ihe, a ka na-eme nchọpụta iji chọpụta usoro ọgwụgwọ kachasị dị irè na ọnụọgụ NMN na ụmụ mmadụ. Otú ọ dị, ọmụmụ ihe ndị e mere ugbu a egosiwo na usoro ọgwụgwọ ruru 500 mg kwa ụbọchị dị mma maka ụmụ nwoke. Bọchị ndị a, Nicotinamide Mononucleotide dị n'ụdị dị iche iche, gụnyere ọgwụ na ntụ ntụ. Ndị na-eweta NMN mgbakwunye na-ekwu na mgbakwunye mgbakwunye dị oke irè n'ịkwalite mmepụta NAD + n'ime ahụ. Nkwupụta ndị a dabere n'eziokwu bụ na Slc12a8, onye na-ebugharị nicotinamide nucleotide, na-enyere aka na ntinye nke NMN na eriri afọ.
Nmn o dikwa ka b3?
NMN abụghị. NMN abụghị ụdị vitamin B3, ọ nweghịkwa ụlọ ọgwụ iji gosi na ọ na-abawanye NAD na mmadụ. NMN abụghịkwa ụdị molekul nke a ga-ewere dị ka vitamin dịka ọ nwere phosphate, nke na-emetụta ikike ya ịbanye na sel.
Kedu nri kachasị elu NAD +?
Nri nke na-eme ka ọkwa NAD dị elu
Enwere ụfọdụ nri nke nwere ike ịkwalite ọkwa NAD na ahụ. Offọdụ n'ime ha gụnyere:
Mmiri ara ehi ara ehi-nnyocha gosiri na mmiri ara ehi bụ ezigbo mmiri Riboside Nicotinamide (RN). Otu liter nke mmiri ara ehi ọhụrụ nwere ihe dị ka 3.9µmol nke NAD +. Ya mere, ka ị na-anụ otu iko mmiri ara ehi na-enye ume ọhụrụ, ị na-etolitekwu ma na-agbasikwu ike!
Azu - nke a bụ ihe ọzọ mere ị ga - eji nwee obi ụtọ azụ! ụfọdụ ụdị azụ dị ka tuna, salmọn na sardines bụ isi mmalite dị ukwuu nke NAD + maka ahụ.
Mushrooms - ọtụtụ ndị nwere mmasị na mushrooms na ha dị ka nri nri oge niile na nri ha na-eri mgbe niile. Mana ịmara na ero, ọkachasị ndị omekome na-enye aka n'ịkwalite ọkwa NAD n'ụzọ nkịtị. Ee, nke ahụ bụ eziokwu. Yabụ, nwee obi ụtọ rie ero ahụ ma ga na-ele anya dị ka obere ma bụrụkwa nwata!
Yist - yist bụ ihe eji eme achịcha na ngwaahịa achicha ndị ọzọ. Yist nwere Riboside Nicotinamide (RN), nke bu ihe omuma nke NAD. Nke a bụ ihe ọzọ mere ka ị na-enwe ọkacha mmasị gị achịcha dị iche iche ma ọ bụ buns mgbe ọ bụla ị gara na-eme bred! Kporie nri gi kacha amasị gi ma na-ebuli ọkwa NAD n'otu oge. Lee ka nke ahụ si dị mma!
Akwụkwọ nri Green - akwụkwọ nri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nwere ụdị nri niile dị na ha nke bara uru n'ọtụtụ ụzọ. N'oge na-adịbeghị anya, ọ bịara mata na akwụkwọ nri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ bụkwa ezigbo isi iyi nke NAD maka ahụ. Fọdụ n'ime akwụkwọ nri ndị a gụnyere peas na asparagus.
Dum ọka - dịka a tụlere na mbụ, Vitamin B3 nwekwara RN, nke bu ụzọ maka NAD. Agbanyeghị, mgbe a na-esi nri ma ọ bụ na-edozi akwụkwọ nri, ihe oriri ma ọ bụ ọka, ha anaghị eri nri na vitamin. Yabụ, a na-atụ aro ka ị rie nri inine na were ọka buru ibu karịa nri esichara.
Beelata ihe ọ Alụ Alụ na-aba n'anya - NAD bụ ọrụ maka ịnọgide na-enwe usoro metabolism nke ahụ. Mmanya na-egbu egbu na-egbochi usoro ndị a ma belata nrụpụta NAD. Ya mere, ị kwesịrị izere ị intakeụbiga ihe ọ drinksụholicụ na-aba n'anya ókè n'ihi na ha adịghị mma maka ahụike gị.
Nmn na eme akpata nhicha?
A 'Niacin iwepụ' bụ a akụkụ mmetụta nke na-ewere elu doses nke supplementain niacin (Vitamin B3). Iwepụ ọkụ na-eme mgbe niacin na-eme ka obere okpu na akpụkpọ gị gbasaa, nke na-eme ka ọbara na-aga n’elu akpụkpọ ahụ. N'adịghị ka mgbakwunye vitamin B3 (niacin), nicotinamide riboside ekwesịghị ime ka ihu na-achagharị.
Ebee ka m nwere ike ịzụta Nmn na Canada?
NMN bụ nucleotide nke sitere na ribose na nicotinamide. Dị ka nicotinamide riboside (Niagen), NMN bụ ihe na-akpata niacin, yana ihe ntụgharị na NAD +. NMN Canada: Nicotinamide mononucleotide adịghị ugbu a maka ọrịre dị ka mgbakwunye nri na Canada.
Nmn adikwa mma?
Kemgbe ọtụtụ afọ, a na-eduzi ọtụtụ ọmụmụ iji mụọ ma oriri NMN n'ime ụmụ mmadụ dị mma ma ọ bụ na ọ bụghị. Ihe ọmụmụ ndị a, ugboro ugboro, gosipụtara na Nicotinamide Mononucleotide oriri dị oke nchebe mgbe amachibidoro usoro ya. N'ozuzu, a gwara ụmụ nwoke ka ha rapara na ọgwụ kwa ụbọchị nke na-erughị 500 mg. Agbanyeghị, ekwesiri ịkọwapụta na FDA akwadobeghị NMN ka ọ bụrụ ọgwụ dị mma. Yabụ, ọ bụrụ na ị nwere ihe nfụkasị ọ bụla ma ọ bụ nsogbu ahụike, ọ kacha mma ka ị kpọtụrụ dọkịta gị tupu ịmalite mgbakwunye mgbakwunye NMN.
Kedu nke ka mma NAD ma ọ bụ NMN?
NAD na NMN bụ ihe mgbakwunye mgbakwunye ịka nká, yana maka ezi ihe kpatara ya.
Kedụ ka m ga - esi bulite NAD + m?
Ebumnuche Boosting NAD
Nicotinamide Riboside Mgbakwunye nri
Ọtụtụ ìhè anyanwụ nwere ike ọ gaghị adị mma!
Kedu ihe m ga-eji NMN weta?
Iji meziwanye ọkwa NAD + gị, ịnwere ike iwepu NMN oge na-adịghị anya site na Sirtuin Activator dị ka Resveratrol na yogọt zuru oke nke na-enyere biovevailability nke Resveratrol aka.
Ekwesịrị m iji TMG na NMN?
Ọ bụrụ na ị na-ewere NMN ugbu a ma ọ bụ na-eche maka ịmalite, tụlee ijikọ ya na TMG dị ka mgbakwunye agbakwunyere maka methylation. Ndị ọzọ nyere methyl nke nwere ike ịba uru gụnyere methylated B6, B12, na folate.
Kedu ihe dị iche na nicotinamide na nicotinamide riboside? (3)
Niacin bụ ụdị nicotine na-ekpo ọkụ nke ahụ nwere ike ịgbanwe na NAD. Nicotinamide bụ amide nke niacin nke yiri NAD ma nwee obere mmetụta. Nicotinamide riboside bụ ụdị sịntetinamide nwere sịntetị nke nwere àgwà dị iche iche.
Nmn a niacin?
Dị ka nicotinamide riboside, NMN bụ ihe mgbapụta nke niacin, ụmụ mmadụ nwere enzymes nke nwere ike iji NMN mepụta nicotinamide adenine dinucleotide (NADH). N'ime ụmụ oke, NMN na-abanye sel site na obere eriri afọ n'ime nkeji 10 na-atụgharị na NAD + site na onye na-ebugharị Slc12a8 NMN.
Ndi nicotinamide riboside dị ala BP?
Nicotinamide riboside bụ ihe na-eme nke ọma na nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +), onye mgbasa ozi dị oke egwu nke uru bara uru nke mgbochi caloric, ya mere mmachi caloric ọhụrụ mimetic compound. N'oge na-adịbeghị anya, anyị mechara ihe ọmụmụ pilot mbụ nke nicotinamide riboside supplementation na ndị okenye na ndị okenye toro eto ma gosipụta na izu 6 nke mgbakwunye na-ebelata systolic ọbara mgbali (SBP) site na 8 mmHg na ndị nwere SBP ntọala nke 120-139 mmHg (elu SBP / ogbo 1 ọbara mgbali elu) ma e jiri ya tụnyere placebo, ma wedata akwara, ike na-ekwu banyere CVD na ọrịa na ọnwụ metụtara ya.
Ebee ka betaine dị?
Betaine dị na microorganisms, osisi, na anụmanụ ma bụrụ akụkụ dị mkpa nke ọtụtụ nri, gụnyere ọka wheat, azụ azụ, akwụkwọ nri, na beets bekee. Betaine bụ ngwongwo ammonium quaternary zwitterionic nke a makwaara dị ka trimethylglycine, glycine betaine, lycine, na oxyneurine.
Gịnị oriri na-akwụsị wrinkles?
Ndị a bụ nri iri kachasị mma na-egbochi ịka nká iji zụọ ahụ gị maka nchapụta nke na-esite n'ime.
Obere mgbịrịgba na-acha ọbara ọbara
Ofe dị ụtọ
Kedu ka m ga-esi yie afọ 10 dị obere?
Jiri nkpuchi na-ekpuchi mmiri.
Họrọ ntọala na-enwu gbaa
Mee ntutu gị ka ọ dịtụ ntakịrị
Na-ekpo ọkụ (Mana Emela Ya)
Na-acha ọcha na mmiri mmiri gị
Mechie ihu gị site na igwe ojii
Olee otú m ga-esi kwụsị ihu m ịka nká?
Chebe akpụkpọ gị site na anyanwụ kwa ụbọchị
Tinye mmanu nke onwe gi karia inweta tan
Youụ sịga, kwụsị
Zere ikwughachi ihu gị ugboro ugboro
Rie nri dị mma, nke kwesịrị ekwesị
Na-a lessụ obere mmanya
Na-emega ahụ́ ọtụtụ ụbọchị n'izu
Sachaa anụ ahụ gị nwayọ
Nri ndị dị a makeaa na-eme gị ngwa ngwa?
Nri ụtọ nduku maka fries
Achịcha etinyere maka achịcha ọcha
Mmanụ aeyụ ma ọ bụ mkpụrụ osisi maka ọcha ọcha
Mmanụ oliv ma ọ bụ avocados maka margarine
Jide na anụ ọkụkọ maka anụ esichara
Nwee mmiri ara ehi
Chee echiche ugboro abụọ gbasara soda na kọfị
Na-a alcoholụ mmanya na-aba n'anya
Zere isi nri na oke ọkụ
Gbanwee achicha osikapa
Na-egbochi fructose na lipoic acid
Kedu vitamin dị mma maka ihu ndọlị?
Vitamin C nwekwara ike inye aka gbochie ihe ịrịba ama nke ịka nká n'ihi ọrụ dị mkpa ọ na-arụ na njikọta collagen nke ahụ. Ọ na-enyere aka ịgwọ akpụkpọ ahụ mebiri emebi na, n'ọnọdụ ụfọdụ, na-ebelata ọdịdị nke ndọlị. Inye vitamin C nke ọma nwekwara ike inye aka mezie ma gbochie akpụkpọ akọrọ.
Kedu ihe kpatara anyị ji chọọ Nicotinamide Mononucleotide (NMN)?
Agka nká nwere oge metụtara oge na enyemaka nke arụ ọrụ mmadụ. Ọ bụ ezie na ịka nká bụ ihe a na-apụghị izere ezere na nke a na-apụghị izere ezere, ndị ọkà mmụta sayensị etinyewo ọtụtụ afọ iji ghọta otú usoro a pụrụ isi gbuo oge ma chịkwaa ya. Nnyocha a na-aga n'ihu emeela ka nchọpụta ọtụtụ ihe na ogige nwere ihe ndị na-egbochi ịka nká nke nwere ike gbanwee ghọọ ihe mgbakwunye ịka nká. Otu ihe dị otú ahụ nwere nnukwu ihe ịka nká nke nwere ndị ọkà mmụta sayensị na-enwe mmasị na ya bụ NMN ma ọ bụ Nicotinamide Mononucleotide. N'isiokwu a, anyị na-atụle ihe niile enwere ịma maka NMN yana mgbakwunye mgbatị kachasị mma nke nicotinamide mononucleotide na 2021.
Nicotinamide Mononucleotide (NMN) Na-eji
Ruo afọ ole na ole gara aga, a na-eme ihe ọmụmụ niile metụtara NMN na ụmụ anụmanụ na ebe ọmụmụ ndị a gosipụtara nsonaazụ na-ekwe nkwa, nsonaazụ ndị a ezughi iji gosipụta uru nke NMN iji mmadụ. Na 2016, emere nnyocha iji nyochaa nchekwa nke oriri NMN yana oge ya n'ọbara mmadụ. Ọmụmụ ihe ahụ rụpụtara nsonaazụ na-ekwe nkwa. Zipu nke ahụ, e mere nchọpụta ọzọ na 2016 iji mụọ mmetụta nke oriri NMN na ụmụ nwanyị 50 toro eto na-arịa BMI dị elu, glucose ọbara, na triglycerides ọbara. Ọmụmụ ihe ahụ gara nke ọma. Otú ọ dị, ebe ọ bụ nanị ụmụ nwanyị nọ n'afọ ndụ ka a na-amụ ihe, ndị ọkà mmụta sayensị kwenyere na achọrọ ihe akaebe ọzọ iji gosi ma oriri NMN dị mma maka ụmụ mmadụ.
Ya mere, n'oge na-adịbeghị anya, na 2019, e duziri ọmụmụ ihe na Clinical Trial Unit nke Keio University School of Medicine. Isiokwu ọmụmụ ihe ahụ bụ ụmụ nwoke 10 dị n’agbata afọ 40 na 60. Ndị a na-etinye ọgwụ ndị sitere na 100 mg ruo 500 mg. Ọmụmụ ihe ahụ kwubiri na ụmụ mmadụ na-anabata NMN ma dịrị mma iri ma ọ bụrụhaala na a na-achịkwa oriri ya nke ọma. Ọmụmụ ihe a dị oke mkpa dịka ọ bụ nyocha NMN mbụ emere na ụmụ mmadụ iji mụọ mmetụta NMN na ahụike mmadụ niile. Ozugbo e gosipụtara na oriri NMN dị mma, ndị nrụpụta malitere ịtụ bọmbụ na mgbakwunye NMN, bụ nke a na-ahụkarị n'oge a. (2) Yoshino, J., et al. (2011)….
N'akụkụ a, anyị na-atụle uru ndị metụtara Nicotinamide Mononucleotide ma ọ bụ uru NMN.
① NMN Na-akwụsịlata ingka nká
Otu uru kasịnụ nke NMN bụ na ọ na-akwụsịlata ịka nkata. Afọ ole na ole gara aga David Sinclair, onye ọkachamara ama ama na Ọrịa Ọrịa Ọrịa Ọrịa na Australia, nyere ihe akaebe na NAD + na-akwụsịlata ịka nká yana ọrịa nke metụtara afọ. Agbanyeghị, mmepụta NAD + na-ebelata site na afọ. Ya mere, ka ụmụ mmadụ na-eme agadi, ọ dị mkpa na ihe ga - eme NAD + na - abawanye n'ime ahụ ha. Nke a bụ ebe NMN batara: NMN batara niime ụmị ahụ wee na-agbanwe ọtụtụ kemịkalụ tupu ọ ghọọ NAD + ma mee ka usoro ịka nkata kwụsịlata.
② Ndị Na-arịa Ọrịa shuga Nwere Ike irite Uru na Oriri Ya
Emere ihe omumu ka omumu ihe NMN onu nyego aka na nri ya na oria nke oria n’azu. Ọmụmụ ihe ahụ kpughere na ụmụ oke nyere ọgwụ NMN a na-ekwu okwu gosipụtara mmụba nke insulin yana mmụba dị elu. Ihe omumu a gosiputara uzo gosiputara na Nicotinamide Mononucleotide ma obu onu okwu NMN nwere ike inyere ndi mmadu n’aria oria shuga aka.
③ A na - ejikọkwa Ntanetị NMN yana Ọrịa Obi Dị Mma
Emere ọmụmụ ihe ọzọ iji mụọ ka mgbakwunye NMN si metụta ahụike obi na ụmụ oke Nnyocha ahụ gosipụtara na NMN ọ bụghị nanị tụgharịrị arịa ọbara metụtara afọ na ihe mmerụ ahụ dị na ụmụ oke, kamakwa ọ butere n'ọbara nke ọma. Ihe kacha gbagwojuru anya bu eziokwu n’onyinye enyere onu ogugu nke NMN, a choputara ọgbasa nke obara ohuru. N'oge na-adịbeghị anya, e mere nnyocha ọzọ iji mụọ nsonaazụ nke NMN na ahụike obi na ụmụ oke ma ọmụmụ ihe a kpugherekwa nsonaazụ yiri ya. Ọmụmụ ihe ndị a enyegoro ndị nyocha ihe nkwado zuru oke iji kwere na oriri NMN na-akwalite ahụike obi na mmadụ.
Ndị nwere Alzheimer nwere ike irite uru site na NMN Use
N’ebe ndị mmadụ na-arịa ọrịa Alzheimer nọ, ọkwa NAD na-agbadata nke ọma. Ya mere, mgbe ndị mmadụ na-ata ahụhụ site na Alzheimer na-eri NMN, ahụ na-emeghachi omume site na ịba ụba NAD +, nke n'aka nke ya, na-eduga n'ịbawanye ikike moto, na-emewanye usoro ọrụ SIRT3, na-eme ka nchekwa dịkwuo mma, ma na-ebelata neuroinflammation. Yabụ, ndị na-arịa Alzheimer nwere ike irite uru site na iri nri NMN.
⑤ NMN Na-emekwa Ka Ọrụ Akụrụ Ka Mma
Oral NMN oral na ejikọtara ọrụ akụrụ. Nke a bụ n'ihi na NMN na-abawanye nrụpụta nke NAD + na SIRT1, ha abụọ jikọtara ha na ọrụ akụrụkwalite.
Ebee ka ịzụta Nicotinamide Mononucleotide (NMN) ntụ ntụ na nnukwu?
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụta Nicotinamide Mononucleotide (NMN) ntụ ntụ n'ọtụtụ, ebe kachasị mma ịzụta ntụ ntụ NMN bụ cofttek.com. Cofttek bụ ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ na nkà na ụzụ nke na-enye ngwaahịa ọhụrụ na nke dị elu kemgbe 2008. companylọ ọrụ ahụ na-etu ọnụ maka otu ndị R&D na-adọrọ mmasị na ndị nwere ahụmahụ nwere mmepe nke ngwaahịa asọmpi. Cofttek nwere ndị mmekọ ma nyefee ụlọ ọrụ ọgwụ na China, Europe, India, na North America ngwaahịa ya. Β-Nicotinamide Mononucleotide nke Cofttek wetara bụ nke dị oke mma ma dịkwa oke nchekwa maka oriri mmadụ. Karịsịa, ụlọ ọrụ ahụ na-enye ntụ ntụ a n'ọtụtụ, ntụgharị na nkeji nke 25kgs. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-ele anya zuta uzuzu a na nnukwu, Cofttek bụ ụlọ ọrụ ị kwesịrị ịkpọtụrụ - ha bụ ndị kachasị mma ntụpọ Nicotinamide Mononucleotide (NMN) n'ahịa.
(1). Yao, Z., et al. (2017). Nicotinamide Mononucleotide Na-egbochi JNK Ntinye aka na Ntugharị Ọrịa Alzheimer.
(2). Yoshino, J., et al. (2011). Nicotinamide Mononucleotide, a Key NAD (+) Intermediate, Na-emeso Pathophysiology nke Diet na Afọ Ọrịa Na-arịa Ọrịa Shuga na Mice. Cell Metabolism.
(3). Yamamoto, T., et al. (2014). Nicotinamide Mononucleotide, Intermediate of NAD + Synthesis, Na-echebe Obi site na Ischemia na Reperfusion.
(4). Wang, Y., et al. (2018). NAD + Mgbakwunye Na-emezigharị Akụkụ Alzheimer Key na Mmebi Mmebi DNA na Mokpụrụ Mouse Ọhụrụ na Mbupute Mmezi DNA.
(5). Keisuke, O., et al. (2019). Mmetụta nke Ngbanwe Metabolism NAD gbanwere na Nsogbu Metabolic. Akwụkwọ nke Science Biomedical.
(6). Njem inyocha egt.
(7). Oleoylethanolamide (oea) - anwansi anwansi nke ndu gi.
(8). Anandamide vs cbd: kedu nke ka mma maka ahụike gị? Ihe niile ị chọrọ ịma banyere ha!
(9). Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara nicotinamide riboside chloride.
(10). Mmeju nke Magnesium l-threonate: uru, onunu ogwu, na ihe ndi ozo.
(11). Palmitoylethanolamide (agwa): uru, onunu ogwu, ojiji, mgbakwunye.
(12). Top 6 uru uru nke resveratrol Mmeju.
(13). Ihe 5 kacha elu na-ewere phosphatidylserine (ps).
(14). Top 5 uru nke ị pụ pyrroloquinoline quinone (pqq).
(15). Ihe kacha mma nootropic nke alpha gpc.
Echere m na NMN dị irè karịa nicotinamide riboside (NR), ebe ọ nwere ike ịmịkọrọ nke ọma na obere eriri afọ.
Nyocha GeeHii Brain
Ndị mmadụ n'ozuzu ha kwesịrị ịchọta ezigbo ego nke mgbakwunye maka ahụ ha, na-abụkarị ebe dị n'etiti 250mg na 1g. Okenye ị, ka ị nwere ike irite uru site na ya.
Emejula naanị Nicotinamide (NAM). Ọ na-eme ntụgharị nke ihe ịchọrọ. Ọ bụrụ na ị nye ahụ gị NAM ọ ga-eme ka mbelata NAD +.
Họrọ ma NR ma ọ bụ NMN. Ọzọkwa, anwala ịzụta ihe dị nfe nke Alibaba ma ọ bụ ihe ọ bụla. Egosiputala ya n’oge gara aga na otutu n’ime ihe ahu bu ihe adịgboroja ma nwekwa ike imerụ gị ahụ.
Mgbe a na-ebute tupu ịrịa kansa, ọkwa NAD + dị elu kwesịrị ibelata ihe ize ndụ nke mmụba DNA na nchịkọta nke mkpụrụ ndụ senescent, naanị otu ezigbo okwu bụ ịnara NAD + mgbe ọ na-arịa kansa ugbu a, ebe ọ nwere ike mee ka mmepe nke NAD + dabere na ha ka ha jiri NAD + dị ka mkpụrụ ndụ mgbe niile, ọ bụ ya mere o ji dị mma iji nyochaa mkpụrụ ndụ ọbara ọcha gị kwa ọnwa ole na ole. Ọ bụrụ na ịnweghị kansa, ọ kwesịrị igbochi ya.
Enweghị m ike ịgwa mitochondria m okwu, mana mgbe otu afọ na ọkara gachara nmn (sublingual) ị ga-ewepu ya n'aka aka m nwụrụ anwụ.
Enwekwu ume (ike nchekwa, enweghị mmetụta), mgbake ngwa ngwa maka mmega ahụ na nrụgide, ụra ka mma, ọbụna wuru ụfọdụ akwara maka oge mbụ na ndụ m.
NMN na-atụgharị uche na 1g na-enye m ume dị egwu. M na-achọpụta ya ozugbo. Ọhụụ m na-agbanwekwa (ghọrọ nkọ). Ọzọkwa, ọkpụkpụ azụ na-alaghachi n'oge. ;-)
David Sinclair tụrụ aro na ụmụ oke na usoro ọgwụ mgbochi na-adị ogologo ndụ na nke ahụ bara uru.
ozi bara uru.
Ndị mmadụ n'ozuzu ha kwesịrị ịchọta ezigbo ego nke mgbakwunye maka ahụ gị, na-adịkarị n'etiti 250mg na 1g.
Okenye ị, ka ị nwere ike irite uru site na ya.
Nọgide na ya ruo ogologo oge. Achọpụtala m na ihe ochie na-apụ n'anya, obere akpa n'okpuru anya m, na nnukwu mgbanwe metabolism. Ihe na-erughị ihe ọoverụ aụ na-egbu egbu bụkwa ihe dị mma.
Daalụ, Obi dị m ụtọ ịhụ ọmarịcha ihe ọchị na ọchị.